प्रचण्डमाथि यसरी किन खनिए ओली ? हाने यस्तो कटाक्ष ! — Imandarmedia.com
प्रचण्डमाथि यसरी किन खनिए ओली ? हाने यस्तो कटाक्ष !
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव मनहरी तिमिल्सिनाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसबारे एमालेमा चर्चाको विषय बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै यो विषयमा चाँसो देखाएका छन् ।
बालकोट स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले सचिवालका सदस्यमार्फत तिमिल्सिनाको स्टाटस आफैले पढेका शुक्रबार नै स्टाटस पढेका थिए । एमाले निकट दैनिक नेपालले उक्त स्टाटसबारे बनाइएको समाचार अध्यक्ष ओलीले पढेका थिए ।
सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणबारे बोल्यो माओवादी
माओवादी केन्द्रले भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण सामयिक नभएको टिप्पणी गरेको छ । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले काम चलाउ सरकार रहेको अवस्थामा भएको भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमण कुटनीतिक तथा राजनीतिक दुवै रुपमा उपयुक्त नरहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
प्रवक्ता भुसालले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार समेत नबनेको अवस्थामा छिमेकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु स्वभाविकै भएपनि राजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमा भने उपयुक्त हुन नसक्ने तर्क गरिन् ।
विहिबार नेपाल भ्रमणमा आउनु भएकी भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि ‘वान टु वान’ वार्ता गरेकी थिइन् ।
नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढने सन्देश दिने उद्देश्यका साथ भएको भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको भ्रमण उपयुक्त समयमा नभएको कुटनीतिक वृतमा पनि चर्चा हुने गरेको छ ।